Ukufika Kokumaketha Okugxilile, Ubuntatheli Nezemfundo | Martech Zone
Iqiniso elingokoqobo neli-augmented lizodlala indima enkulu ekusaseni lakho. I-TechCrunch ubikezela ukuthi i-AR ephathekayo kungenzeka ibe yimakethe eyizigidigidi ezingama- $ 100 eminyakeni engama-4! Akukhathalekile ukuthi usebenzela inkampani yobuchwepheshe obunqenqemeni, noma endaweni yokubukisa edayisa ifenisha yasehhovisi, ibhizinisi lakho lizohlomula ngandlela thile ngesipiliyoni sokumaketha ogxilile.
Uyini umehluko phakathi kwe-VR ne-AR?
I-Virtual ngokoqobo (i-VR) ingukuzijabulisa kwedijithali kwemvelo ezungeze umsebenzisi, ngenkathi iqiniso elingathandwa kwabathelisi esikubona (AR) limboza izinto ezibonakalayo emhlabeni wangempela.
Awungikholwa? Bheka ezinye izimboni esezivele zamukela i-VR / AR.
Kuleli sonto i-CNN iqale uphiko lwe-VR lobuntatheli olunikezelwe. Leli qembu lizohlanganisa imicimbi emikhulu yezindaba kuvidiyo engu-360 futhi linikele ngesihlalo sangaphambili kulababukeli. Ungacabanga ukuthi usemgqeni ongaphambili endaweni yempi, unesihlalo sangaphambili emhlanganweni olandelayo wezindaba waseWhite House, noma ume esibonelweni sesiphepho? Yilokho ubuntatheli obucwilisayo obuzokuletha etafuleni, kusivumele sisondele endabeni kunanini ngaphambili. I-CNN yethule lolu phiko olusha ngokushicilela indaba yevidiyo ye-VR emboza i- ukugijima kwezinkunzi eSpain.
Ngonyaka odlule, i-CNN izame i-VR, ikhiqiza izindaba ezingaphezu kwezingu-50 kuvidiyo ephezulu engu-360, inika ababukeli ukuqonda okujulile ngokucekelwa phansi kwe-Aleppo, ukubuka ngaphambili kokuvulwa kwe-US kanye nethuba lokuzwa injabulo ye-skydiving - isiyonke, ikhiqiza ukubukwa okungaphezulu kwezigidi ezingama-30 kokuqukethwe okungu-360 ku-Facebook kuphela. Umthombo: CNN
AbakwaLowe bavimbe ukubheja kwabo ukuthi i-VR ingaphazamisa imboni yokuthuthukisa ikhaya. Bethula isipiliyoni esingokoqobo sesitolo esenzelwe ukunika amakhasimende imfundo yezandla yamaphrojekthi afana nokuxuba udaka noma ukubeka ithayili. Ekulingweni kwecala uLowe ubike ukuthi amakhasimende ane- Ukukhumbula okungcono okungama-36% kokuthi ungaqedela kanjani iphrojekthi kuqhathaniswa nabantu ababuka ividiyo ye-Youtube.
Ithimba lezitayela zikaLowe lithole ukuthi izinkulungwane zeminyaka zilahla amaphrojekthi we-DIY ngoba zintula ukuzethemba kokuthuthukisa ikhaya kanye nesikhathi samahhala sephrojekthi. KwabakwaLowe, iqiniso langempela lingaba yindlela yokuguqula lowo mkhuba. Umthombo: CNN
Ngokombono wokumaketha, igama lokumaketha eligxila lichazwa kabusha ngokuphelele. Umuntu angaqala kalula ukucabanga ukuthi mangaki amathuba azokhiqizwa wokukhangisa, ukubekwa komkhiqizo, nezindlela zokudala zokubonisa umkhiqizo. I-VR ixazulula izinkinga eziningi kubakhangisi. Isinikeza indlela yokwakha okuhlangenwe nakho okucwilisayo okunomthelela, okukhunjulwayo futhi kumnandi. Akuvele kube ngcono kunalokho!
Amaqiniso ambalwa athakazelisayo ngawe. UVimeo usanda kungeza ikhono lokulayisha nokubuka amavidiyo angama-360-degree. Lokhu kuzohlinzeka abenzi bamafilimu nobunye ubuciko ukukhombisa nokuthengisa okuqukethwe okungama-360. Masingakhohlwa nge-facebook. Kuze kube manje sekube namavidiyo angaphezu kwesigidi esisodwa sama-360-degree nezithombe ezingamakhulu amabili nanhlanu ze-360-degree ezifakiwe. Akunasizathu sokucabanga ukuthi le ndlela ngeke iqhubeke.
Singathanda ukuzwa imicabango yakho ngekusasa le-VR / AR. Ucabanga ukuthi kuzoba nomthelela ongakanani embonini yakho? Sicela wabelane!
Tags: CnnImmersiveimfundo egxilileubuntatheli obucwilisayoukumaketha okugxilelowe'syehlisa i-holoroomvimeoi-vimeo 360